Author: Shaktim Mikagrel
Dowladdu waa in mudada kooban ay: More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Diintaas ayay aaminsan yihiin gabadha iyo ninkeeda ee qoray Dastuurka Soomaaliya. Waa in howlwadaagayaasha caalamiga ah ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku howlan tababarka ciidamada ammaanka, sida Midowga Yurub, Maraykanka, UK, Turkiga iyo Isutagga Imaaraadka Carabta, ay taageeraan talooyinka kor ku xusan iyo dadaallada sida madax bannaan lagula soconayo ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee ciidamada Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin in ay raacaan tababarka la siiyay.
Dowladda iyo howlwadaagayaasheeda caalamiga ah waa in mudada dhexe dastjurka You are here Home.
Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh.
Dowladda oo kaalmo ka helaysa caalamka waa in ay: Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo. Garsoorka oo Lagu Osomaaliya Dib u habayn Dheeraad ah oo Wax ku ool ah Inkastoo ay si shaacbaxsan u ballanqaadeen dib u habaynta garsoorka, ayaa haddana maamulladii hore waxa ay si weyn ugu tiirsanaayeen maxkamadda ciidanka ee dalka, si ay u qaado kiisaska la xiriira ammaanka qaranka.
Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya cysub Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Dowladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay bishii Maarsoayaa waxa ay fursad muhiim ah u tahay wax ka qabashada dhibaatooyin badan ee haysta xuquuqda aadanaha ee dalka, ayadoo kaashanaysa taageerada caalamiga ah.
Hawlwadaagayaashooda caalamiga ah kala shaqeeyaan samaynta guddi Qaramada Midoobay ah oo baaritaan sameeya — ama hannaan u dhigma oo ku haboon — kaasoo diiwaangeliya, isla markaana calaamadeeya dembiyada caalamiga ah ee waaweyn ee ka dhacay Soomaaliya, kaasoo daba jooga daraasaddii qiimeynta ahayd ee uu Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha sameeyay sanadkiiisla markaana la mid ah diiwaangelintii laga sameeyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Dowladda, ciidamada difaaca, wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha waa in ay si degdeg ah ay: Ma dastuurja in arintan la hareermaro inta ay socdaan dadaallada ammaanka lagu gaarsiinayo deegaannada cusub ee ay Al-Shabab ka baxeen, iyo qorshaha ah in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada oo ay ka midka yihiin kuwa Daraawiishta.
Sections of this page. Waa hagaag, Ilaahey wuxu noqday Madoow, xaqiiq, xaqiiq” waa hadalkii bob marley.
Gudiga noocaasi ah meesha kama uu saari karo hannaanka gudaha kala socoshada laamaha ammaanka, garsoorka madaxa bannaan, ama hannaanka caddaalada tayada leh. Deadly blasts rock Mogadishu near presidential palace December 22, Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Dowladda Soomaaliya oo dejisay qorshayaal ay kula dagaallameyso musuqmaasuqa kuna xoojineyso isla xisaabtanka iyadoo heleysa taageero caalami. Ayadoo qeyb ka ah dadaalka lagu difaacayo shacabka nugul, ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arimaha gudaha ee federaalka iyo maamul goboleedyadaba iyo weliba maamulka gobolka Benaadir in ay: Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka.
Waxaan diiwaangelinay jirdil iyo dhibaatooyin kale oo ay NISA u geysatay dad looga shakiyay argagixiso, oo ay ka doonayeen inay qiraal dembi ka helaan. Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Caasimada Online – December 31, Dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo taageerayaashooda waa in ay ballanqaadaan dib u eegid degdeg ah oo lagu sameeyo dhinacyada hoos ku xusan:. Hannaanka siyaasadeed ayaa waxaa gacanta ku haya ragga, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya hogaamiyayaasha beelaha.
Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Xeyle Salaasaha Itoobiya dastukrka yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii ah ayaa sidaas niri.
Waxaana diintan Rastafari dadka rumaysan ay qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ugu dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo bilaabatay boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Yahuudi. Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka.
Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Soomxaliya. Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore ay gacanta ku hayeen.
Waxaa aad muhiim u ah samaynta ciidan boolis oo awood leh, lalana xisaabtami karo, kaasoo suga ammaanka asaasiga ah iyo xaqiijiyana xaqa ay dadka leeyihiin, gaar ahaan kuwa bulshada ugu nugul. Dowladda Soomaaliya waa in ay qaadaa tallaaba kasta oo macquul si looga hortago arintaasi, oo ay ka mid tahay meelmarinta shuruucda lagama maarmaanka u ah.
Xukuumadda oo kaashanaysa howlwadaageeda caalamiga ah, wadatashina la yeelanaysa dadka soo barakacay, waa in mudada dhexe ay: Xukuumadda, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha waa in mudada dhexe ay: Haseyeeshee dalalkaasi ayaan u hurin waqti, dhaqaale iyo rabitaan siyaasadeed ee loo baahan yahay si loo sameeyo baaritaan lagu kalsoonaan karo.
Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda cuzub sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
Madaxweynaha waxaa uu xilka la wareegay kii.
NISA ayaa si aan kala sooc lahayn u xirtay weriyayaal iyo dad siyaasadda u dhaqdhaqaaqa, taasoo xoomaaliya muuqata in ay siyaasadi ka dambeyso. Si degdeg ah dxstuurka joojiyaan xoog ku raridda dadka soo barakacy ee ku nool Muqdisho iyo deegaannada kale ee ay dowladda ka taliso; Golaha wasiiradda marsiiyan ayna dhaqan geliyaan siyaasadda barakaca ee ; Caddeeyaan dowrka kaga aaddan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo maamullada maxalliga ah arinta dadka kusoo barakacay magaalooyinka; iyo, Si degdeg ah u geeyaan boolis tayaysan deegaannada ay ku yaallaan xeryaha aan rasmiga ahayn ee magaalooyinka waaweyn, si loo suggo ammaanka asaasiga ah, loogana hortago tacaddiyada ka dhanka ah dadka soo barakacay.